Moe Kai: ပြီးပြန်ပေါ့ ဒီနှစ် အတာ သင်္ကြန်
ပြန်တွေးရင် ဟိုးကလေးငယ်လေးတွေ က သင်္ကြန်ဆို ခွက်စောင်းခုတ်၊ ရေပူဖေါင်း ပြစ် ခဲ့ကြသလုို၊ နဲနဲ ကြီးလာတော့ ရေပက်ခံထွက်၊ မဏ္ဋပ်တွေမှာ ကဲခဲ့ ဖူးကြမှပါ။ နောက် ဒီထက် အရွယ်လေးပိုရတော့ ရောဂီ တပါတ်လေးခြုံ တရား စခန်းဝင် ကုသိုလ် ကောင်းမှုလေးလုပ်ကြ။ ဥပုဒ်လေးတွေ စောင့်ကြ။
ငယ်ကဆို အမြဲ တွေးမိတာက သင်္ကြန်ဆို ရင် လူအမျိုးအစား အုပ်စု ၄ မျိုး ရှိ မယ်လုို.။
- ရေ ကစားမယ်၊ ရေပက်ခံ ထွက်မယ် ဆိုတဲ့ အုပ်စု၊ ခုတော့ ဘီယာလေးသောက် ပျော်မြူး ကြတာလေးတွေလဲ ပါမယ် လို. ပြောလုို.ရမယ်ထင်ပါတယ်၊
- သင်္ကြန် ယိမ်းနဲ. တီးဆို ကခုန် ကြသူတွေရယ်၊
- အိမ်မှာ ကုပ်၊ တီဗွီလေး ကြည့်၊ စာအုပ်လေးဖတ် အနားယူ တဲ့ သူတွေရယ်၊
- တရားစခန်း သွား၊ တရားထိုင် ဝေယျာဝစ္စ လုပ်ကြသူ တွေရယ်၊
ကျမတော့ အဲဒီ လေးမျိုးလုံး လုပ်ဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ. အသက်နဲ. ဆော့ဖေါ် ဒါနဖေါ် တွေပေါ် မူတည် ပြီးတော့ ပေါ့။ ခုတော့ ဒီနိုင်ငံခြားမှာ YOutube က နေ သင်္ကြန် သီချင်းလေးတွေ ကြည့် နားထောင် အိမ် အလွမ်းဖြေ နေရပါတယ်။ သင်္ကြန်ရဲ. တကယ့် မူရင်း အနှစ်သာရလေး မမေ့ပျောက်ရအောင် တော့ မနက်ဖန် ဘုရားမှာ ကောင်းမှုလေးတွေ လုပ်၊ တနှစ်တာရဲ. အညစ်အကျေးတွေကို သန်.စဉ်ပြီး (တော်တော် များတယ်ဆိုတာတော့ မပြောလဲ သိမှာပါနော် ဟိ) နောက်နှစ် အတွက် ကျိုဆို လိုက်ပါဦးမယ်။
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်တဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို. ....